လွန်းကအင်တာနက် Porn: အဆိုပါ SADD Effect, မှ Ian Kerner ပါရဂူဘွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2013) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
လွန်းကအင်တာနက် Porn: အဆိုပါ SADD Effect
မှ Ian Kerner အားဖြင့်
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းများသက်သက်အမျိုးမျိုးရန်လွယ်ကူ access ကိုကပုံမှန်အားဖြင့်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်မညျ့သူထိခိုက်နစ်နာပျမ်းမျှအားယောက်ျားတွေများပါရှိသည်။
တစ်လိင်ကုထုံးနှင့်တည်ထောင်သူအဖြစ် အိပ်ရာအတွက်ကောင်းသောငါ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Attention Deficit Disorder," သို့မဟုတ် SADD ဟုအမည်ပေးထားသည့်င့်သစ်တစ်ခု syndrome ရောဂါခံစားရသူကိုယောက်ျားတစ်ဦးချွန်ထက်တိုးမြင်ကြပါတယ်။ သိပ် - ထိုအခါဤပြဿနာများ၏အရင်းအမြစ်ရုံဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ပါသည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်း.
ADD ၏နှင့်အတူလူကိုအလွယ်တကူအာရုံနေကြသည်နည်းတူ, SADD နှင့်အတူယောက်ျားတွေသူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်မိန်းမနှင့်အစစ်အမှန်လိင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းနေအင်တာနက်ညစ်ညမ်းထံမှလာသည်ဟုအမြင်အာရုံအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆွများ၏မြင့်မားဖို့ဒါနေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီ။ ရလဒ်အဖြစ် SADD နှင့်အတူယောက်ျားတွေမကြာခဏခက်ခဲမှရှာတွေ့ တစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန် လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်သာလက်စွဲစာအုပ်သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆွနှင့်အတူထှတျအထိပျနိုငျသညျ။
SADD နှင့်အတူယောက်ျားသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်စဉ်အတွင်းပျင်းသို့မဟုတ်စိတ်မရှည်တဲ့ကိုရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာဖြစ်နိုင်သည် ဇီဝကမ္မ နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူ, ဒါပေမဲ့သူတို့အထွတ်အထိပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အနေဖြင့်ကုန်ခမ်းနေသောကြောင့်, SADD နှင့်အတူယောက်ျားတွေလည်းရိုးရှင်းစွာစစ်မှန်သောလိင်များအတွက် Mojo ကင်းမဲ့စေခြင်းငှါ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ သူတို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်း, အပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့အပေါ် run မပါတယ်။
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ငါပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေ ejaculate နိုင်ဘူး (နှင့်မကြာခဏကကိုအတုခဲ့ကြသည်) အဘယ်ကြောင့်အံ့ဩသောမိန်းမတို့၏တိုင်ကြားချက်မှတဆင့် SADD သတိထားဖြစ်လာခဲ့သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်လိင်စဉ်အတွင်းပြတ်တောက်သို့မဟုတ်စိတ်မဝင်စားသလိုပဲသတိပြုမိသူကို။ ကျွန်မအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူး, သို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ရန်ပြောဆိုသောအခါ, ငါဒီလူကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏လွယ်ကူစွာမှပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီး masturbating ခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်လာတယ်။ တခါတရံမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်းကို masturbating ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့သဘာဝကဆန့်ကျင်ဘက်ကာလသဘောပေါက်ဘူး - စိုက်ထူအကြားပြန်လည်နာလန်ထူအချိန် - သူတို့အသက်အဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်ကာရယ်, ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး။ ဒါဟာကောင်လေးတချို့ရေနွေးငွေ့ကိုချွတ်မှုတ်ကူညီပေးသည်နှင့် 30-ဒုတိယ spa နေ့ကကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သို့သော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းများသက်သက်အမျိုးမျိုးရန်လွယ်ကူ access ကိုကပုံမှန်အားဖြင့်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်မညျ့သူထိခိုက်နစ်နာပျမ်းမျှအားယောက်ျားတွေများပါရှိသည်။ ထိုကြောင့်ဤယောက်ျားတစ်ဦးညစ်ညမ်း-enabled အော်ဂဇင်ရဲ့လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်တပ်မက်ဖို့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် rewired ပါပြီ။ ဤသည်ကိုသူတို့ဆေးခန်းတစ်ခု idiosyncratic masturbatory စတိုင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းရဲ့အဘယ်အရာကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနေသည်ဟုဆိုလိုသည်: သူတို့ကအစစ်အမှန်လိင်စဉ်အတွင်း approximated မဟုတ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွတစ်ခုပြင်းထန်သောအမျိုးအစားမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုလေ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒ၏သူတို့ရဲ့ခြုံငုံအဆင့်ဆင့်ချဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့တစ်တွေအပြည့်အဝစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ရန်အတွက်စစ်မှန်သောလိင်စဉ်အတွင်း fantasize ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျ SADD ခံစားနေရပြီးထင်ပါသလား ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲ…
လုပ်ဖို့ SADD နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ယောက်ကဘာလဲ?
ပထမဦးစွာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေး တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ ချိုး။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အဘို့သင့် Mojo သိမ်းဆည်းပါ။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဆိုရင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသင့်ရဲ့ကြိမ်နှုန်းလျော့ကျသွားသည်။ သငျသညျ masturbate ပြုကြလျှင်, သင်၏ Non-ကြီးစိုးလက်ကိုအသုံးပြုပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦး righty ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏လက်ဝဲတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိ။ သင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းသင်၏ကြီးစိုးလက်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှု၏တူညီသောအဆင့်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါကြောင့်သင်အဖြစ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်လိင်ဆက်ဆံမှု၏အာရုံမှ numbed မည်မဟုတ်ပါ။
ဒုတိယ, ချွတ် lay porn။ သငျသညျ masturbate သောအခါ, ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးလိင်၏တစ်ခုတည်းသောဖြစ်စဉ်များမှတ်မိဖို့ကြိုးစားရန်သင့်စိတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဖတ်တီဗွီကြည့်အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားသမိုင်းနှင့် sexy အမှတ်တရများ၏သင့်ကိုယ်ပိုင် catalog နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။
ဝေမျှမယ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အခန်းကဏ္ဍကစားအတူစမ်းသပ်မှု: သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတိုးပေးရန်။ သငျသညျလိင်ဆက်ဆံမှုရှိမီ, သငျသညျအထွတ်အထိပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနေတဲ့အချက်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်မရ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal ။ SADD သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်ဝမ်းနည်းဖြစ်မရှိပါ။ ပျောက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေနှငျ့သငျ့အိပ်ခန်းဆီသို့အဆင့်, သင်ပြန်ပိုင်ဆိုင်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အာရုံကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ် - သင့်ကိုမှန်ကန်လိင်ဘဝပေါ်မှာ။
မှ Ian Kerner, Ph.D တစ်ဦးလိင်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ် The New York Times Harper ကို Collins များအတွက်မြောက်မြားစွာစာအုပ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာအပါအဝင် သူမသည်ပထမဦးစွာလာ။ သူ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် GoodInBed.com နှင့်မကြာသေးမီကမှတစ်ဦးလမ်းပြရေးသား အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ကျော်လွှား.